जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस् जेठ २४ गते मंगलबारकाे राशिफल
June 6, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस् जेठ २४ गते मंगलबारकाे राशिफल
मेष राशि : आम्दानीमा वृद्धि र प्रगति अनुकूल रहनेछ। लाभको अवसर आउनेछ । साझेदारहरूको सहयोग समयमै प्राप्त हुनेछ। यात्राको योजना बन्नेछ । स्थायी सम्पत्तिको कामले ठूलो लाभ दिन सक्छ। बेरोजगारी हटाउने प्रयास सफल हुनेछन्। घरबाहिर केही तनाव रहनेछ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । वृष राशि : व्यापार-व्यवसाय अनुकूल हुनेछ। रचनात्मक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। काम गर्न मन लाग्नेछ। […]
June 6, 2022 N88LeaveaComment on नीता ढुंगाना र हरिहर अधिकारी लगनगाँठो कस्दै, जुर्याे शुभसाइत !
काठमाडौँ । नायिका नीता ढुंगाना र नायक हरिहर अधिकारी आगामी असार २४ गते विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन् । केही वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरुले विवाह गर्न लागेका हुन् । यद्यपि आफ्नो प्रेम सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेका पनि छैनन्, लुकाएका पनि छैनन् । स्रोतका अनुसार आउँदो २४ असारमा विवाह र २६ असारमा रिसेप्सेनको टुंगो लागिसकेको छ । दुवै […]
यस्तो रहेछ नेकपा एसका मन्त्री फिर्ता गर्नुपर्ने मुख्य कारण !
June 6, 2022 N88LeaveaComment on यस्तो रहेछ नेकपा एसका मन्त्री फिर्ता गर्नुपर्ने मुख्य कारण !
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा रहेका एक राज्यमन्त्रीसहित चार जनालाई फिर्ता बोलाउँदै अन्य ५ जनालाई सिफारिस गरेको छ। जसको शपथ ग्रहण सोमबार हुने बताइएको छ। सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्री फिर्ता गर्नका लागि समाजवादीको सचिवालयमा दबाब परेको थियो। कामको विषयमा खास लेखाजोखा गरेर नै मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयमा पार्टी पुगेको थियो। यसभित्र पनि मुख्य कारणचाहिँ […]
बालेन, हर्क साम्पाङ जितेर कञ्चन हारेर चर्चामा : फेरि निकाले अधिकृतमै नाम !
June 6, 2022 N88LeaveaComment on बालेन, हर्क साम्पाङ जितेर कञ्चन हारेर चर्चामा : फेरि निकाले अधिकृतमै नाम !
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह, हर्क साङपाङ चुनाव जितेर चर्चामा आए । तर, स्वतन्त्रबाट चुनाव हार्ने पनि के कम ! सरकारी अधिकृतको जागिर हापेर मेयरको चुनाव लड्न पुगेका कञ्चन गिरी, चुनाव हारेर पनि चर्चामा आएका छन् । र, यसैलाई भन्छन् होला ‘भाग्यमानीको भुतै कमारो’ । सरकारी जागिर लात मारेर बनेपा नगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लडेका उनले २ […]
नेकपा एसले सिफारिस गरेको नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली पुग्याे प्रधानमन्त्री देउवाको हातमा
June 6, 2022 N88LeaveaComment on नेकपा एसले सिफारिस गरेको नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली पुग्याे प्रधानमन्त्री देउवाको हातमा
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर नेताहरू विजय पौडेल र प्रमेश हमालले देउवालाई नामावली बुझाएका हुन् । आजै मन्त्रीहरूलाई सपथ गराउने गरी नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको पार्टी उपसचिव विजय पौडेलले एभरेष्ट हेडलाइनलाई जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार मेटमणि चौधरी शहरी […]